यी हुन् कपाल प्रत्यारोपण गर्ने सेलेब्रिटी – " सुलभ खबर "
यी हुन् कपाल प्रत्यारोपण गर्ने सेलेब्रिटी
सपिङमा जाँदा गायक रामचन्द्र काफ्लेका आँखा राम्रा क्यापतिर जान्थे । शिरमा कपाल नहुँदाको पीडा उनी क्याप लगाएर छोप्थे । तीन वर्षअघि जब उनले कपाल प्रत्यारोपण गरे, सपिङका क्रममा क्यापतिर ध्यान जानै छाड्यो । काफ्ले भन्छन्, ‘कपाल प्रत्यारोपणपछि आफूलाई थप ह्यान्डसम भएको महसुस गरेको छु ।’ आफूले कपाल प्रत्यारोपण गरेको विषयलाई गोप्य राख्नेहरू पनि नभएका होइनन् । गायक काफ्ले भने साथीभाइमाझ त्यसबारे खुलेर कुरा गर्छन् । उनले डा. आयुष्मान घिमिरेबाट कपाल प्रत्यारोपण गरेका हुन् ।
व्यक्तित्वलाई सुन्दर देखाउन कपालको पनि भूमिका रहन्छ । उमेर ढल्किँदै जाँदा या अन्य कारणले धेरैमा कपाल झर्ने समस्या देखिन्छ । केही नेपाली सेलेब्रिटीले पनि युवावयमै कपाल झर्ने समस्या व्यहोरेका छन् । त्यसको समाधान उनीहरूले कपाल प्रत्यारोपणबाट निकालेका छन् ।
अभिनेता धीरेन शाक्यले भारत, थाइल्यान्ड, अमेरिकालगायत मुलुक पुगेर आफ्नो कपाल बचाउने उपाय खोजी गरे । दुई वर्षअघि नेपालमै कपाल प्रत्यारोपण गराए । त्यसयता आफ्नो बुढोपन हराएको र आत्मविश्वास बढेको उनी बताउँछन् ।
तिनैमध्येमा पर्छन्, अभिनेता धीरेन शाक्य पनि । टाउकोको मध्यभागबाट कपाल पातलिँदै गएपछि उनलाई निकै तनाव भयो । कपाल बाक्लो बनाउने अनेक उपाय खोजे । भारत, थाइल्यान्ड, अमेरिकालगायत मुलुक पुग्दा उनले आफ्नो कपाल बचाउने उपायको खोजी गरे । ‘सुरुमा कपाल प्रत्यारोपण गर्न डराएँ,’ उनी भन्छन्, ‘पछि आत्मविश्वास बढ्यो । अनि दुई वर्षअघि नेपालमै प्रत्यारोपण गरेँ ।’ कपाल झरेकै कारण केही सिनेमा र म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्न नमिलेको पीडा पनि खेपेका थिए, शाक्यले । अहिले त्यो समस्या छैन । भन्छन्, ‘कपाल प्रत्यारोपणले मेरो बुढोपन हटाएको छ र आफ्नो क्षेत्रमा लाग्न थप प्रेरित गरेको छ ।’ कपाल पातलिएको तनावबाट मुक्त छन्, उनी अहिले ।
कपाल प्रत्यारोपण गर्ने अर्का सेलेब्रिटी हुन्, गायक यशकुमार । कपाल पातलो भएकाले उनी टाउकोमा रुमाल छुटाउँदैनथे । शिरमा चार हजार तीन सयवटा कपाल रोपेपछि भने उनको समस्या समाधान भएको छ । ‘पातलो कपाललाई बाक्लो बनाएँ, अहिले कपालको अति माया लाग्छ,’ उनी भन्छन् । आफूले कपाल प्रत्यारोपण गर्दा साथीभाइ र प्रशंसकहरूमा पनि यसप्रति विश्वास बढेको उनको भनाइ छ । कपाल प्रत्यारोपणपछि आफूले नयाँ ‘लुक्स’ पाएको उनी बताउँछन् ।
डा. आयुष्मान घिमिरेका अनुसार अभिनेत्री मलिना जोशी, अभिनेता अनुपविक्रम शाही, गायक भरत सिटौला, गायक सुनीलसिंह ठकुरीलगायत सेलेब्रिटीले उनीसँग कपाल प्रत्यारोपण गराएका छन् । सुरुमा उनीहरू डराएका थिए । डा. घिमिरे आफैँले कपाल प्रत्यारोपण गरेर उनीहरूमा विश्वास बढाइदिए ।
यस्तै, सन् २०११ मा ‘मिस्टर नेपाल’ बनेका डा. आयुष्मान घिमिरे फिल्म ‘चकलेट’का अभिनेता पनि हुन् । अभिनय र मेडिकल दुवै क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका उनले ‘आवरण स्किन एन्ड हेयर क्लिनिक’ सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनी आफैँले शिरको दुई किनारामा कपाल उमारेका छन् । अभिनेत्री माला लिम्बूको आँखीभौँ पनि प्रत्यारोपण गरेका छन्, उनले । डा. घिमिरेका अनुसार अभिनेत्री मलिना जोशी, अभिनेता अनुपविक्रम शाही, गायक भरत सिटौला, गायक सुनीलसिंह ठकुरीलगायत सेलेब्रिटीले उनीसँग कपाल प्रत्यारोपण गराएका छन् । सुरुमा सेलेब्रिटीहरू कपाल प्रत्यारोपण गर्न डराएको उनी बताउँछन् । ‘आफैँले प्रत्यारोपण गरेपछि उनीहरूमा पनि विश्वास बढ्यो,’ उनी भन्छन् ।
रुद्राक्षको प्रयोग गरि हटाउनुहोस् यी रोगहरु ! हेर्नुहोस् स्वास्थ्यमा रुद्राक्षको अचुक महत्व !
हिन्दू धर्म अनुसार रुद्राक्षको ठुलो महत्व रहने गर्छ । भगवान शिवसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले
कपालमा चाया पर्ने समस्याको शिकार अधिकांश व्यक्ति भइरहेका हुन्छन् । जाडो होस् या गर्मी कपालमा
के तपाईंको बच्चामा यस्ता लक्षण देखा परेका छन्? हुनसक्छ यस्तो गम्भीर समस्या !
हामीलाई लाग्न सक्छ यूटीआई वा मूत्र पथ संक्रमण प्राय: महिलालाई हुन्छ। तर धेरैजसो महिला र
थाहा पाउनुहोस् चिप्ले भिन्डीका अनेकौँ फाइदा
काठमाडौँ- सागसब्जीको कुरा गरौं वा फलफूलको । मौसम अनुकूल उपभोग गर्नु लाभदायक हुन्छ । जाडो
सामान्यतया जो केहिलाई पनि चिसोको समयमा हाडजोर्नीको समस्या हुने गर्दछ । बढ्दो उमेरका मानिसहरुलाई क्याल्सियमको
काठमाडौं– अहिले जाडोको मौसम सुरु भएको छ । यो समयमा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु धेरैको